प्रकाशित मिति : Fri-10-Jan-2020
- सारदा राना , एचआर हेड ,सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा लि
सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका एचआर हेड शारदा रानासँगको वार्ता
नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रको अग्रणी संस्था टाटा मोटर्सका लागि एक मात्र अधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले अटोमोबाइल क्षेत्रको प्राविधिक पक्षलाई सम्बोधन गर्ने बजारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपालमै अटो इलेक्ट्रिसियन तालिम सञ्चालन गर्दैछ । के हो त अटो इलेक्ट्रिसियन तालिम ?यसमा ककसले भाग लिन पाउँछन् रु आउनुहोस् हेरौँ सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका एचआर हेड सारदा रानासँगको यो वार्ता ः
टाटा मोटर्सले प्राविधिक तथा व्यावहारिक तालिम सञ्चालन गर्दै छ । यो कस्तो खालको तालिम हो रु यसबाट कोको लाभान्वित हुनेछन् ?
अटो प्राविधिक तालिम तपाईंहरुको एकल पहलमा भएको हो कि कुनै सङ्घ संस्था वा निकायसँगको पहलमा हो रु यस किसिमको तालिममा कोको समावेश हुन पाउँछन् ?
यसभन्दा अघि सञ्चालन गरिएका तीनवटा तालिमहरुले कस्तो खालको उपलब्धि हात लाग्यो रु अहिले कस्तो खालको अपेक्षा राख्नुभएको छ नि ?
अहिलेको समय प्रतिस्पर्धीको युग हो । जुन क्षेत्रमा जो सक्षम हुन्छ उसैले अवसर पाउने हो । तर यसो भन्दैमा बन्देज हुँदैन । अटो इलेक्ट्रिसियन तालिमका लागि हामीसँग सीमित सिट छ । ६ महिने कोर्सका लागि जम्मा १० जनालाई तालिम प्रदान गर्दै छौँ । त्यसमा बेसिक कोर्सदेखि इन्टरमिडिएट र डिप्लोमासम्मको कोर्सको सिकाइ हुन्छ । यसका लागि उपयुक्त प्रशिक्षार्थी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले शैक्षिक कन्डिसन प्रावधानहरु राखेका छौँ । त्यसबाहेक अन्तरवार्तालाई पनि प्रशिक्षार्थी छनोटको आधार बनाएका छौँ । यदि तालिमका लागि आवेदन माग गरेभन्दा बढी परे मात्र यसो गरिनेछ ।